Ibhokisi eyothusayo yoSuku lweValentine | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ibhokisi eyothusayo yoSuku lweValentine
UAlicia tomero | | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yeekhadibhodi, Imisebenzi yezandla yoSuku lweValentine
Ezi ntlobo zeebhokisi ziyamangalisa. Ngokomntu, kuyamangalisa ukunika into ethandekayo kwaye injalo izele ziindawo ezincinci kunye neekrani. Lo msebenzi wezandla uyilwe ngenjongo yokunika umyalezo, ngolu suku ukuba Usuku lwezithandani, kunye nokufihla iinkcukacha ezincinci ngendlela eyothusayo. Iya kuba nenkangeleko yebhokisi eya kuboniswa kuyo Iibhokisi ezimbini kunye nemiyalezo emincinci. Ukuyenza inyathelo ngenyathelo unevidiyo yokubonisa ukuze ungaphoswa naziphi na iinkcukacha.
1 Izinto endizisebenzise kwibhokisi:
2 Inyathelo lokuqala:
3 Isinyathelo sesibini:
4 Inyathelo lesithathu:
5 Inyathelo lesine:
6 Inyathelo lesihlanu:
7 Inyathelo lesithandathu:
8 Inyathelo lesixhenxe:
9 Inyathelo lesibhozo:
Izinto endizisebenzise kwibhokisi:
Ikhadibhodi emnyama enkulu, nangona ungakhetha nawuphi na umbala.
Ipeni emhlophe okanye ipeyinti.
Iphepha elimhlophe okanye ikhadibhodi.
Iipeyinti zokuzoba kunye nokubhala umyalezo.
I-silicone eshushu kunye nompu wakhe.
Iintlobo ezahlukeneyo zokusika iifomathi ezincinci zokufa.
Enye i-cardstock ebomvu okanye ekhazimlayo ukwenza iimilo kunye nokuhombisa ibhokisi.
Ungalibona eli nyathelo lobugcisa ngenyathelo kule vidiyo ilandelayo:
Kwikhadibhodi sikhetha, sithatha isikwere esikhulu 24 x 24 cm. Ngaphakathi kuyo siyazoba 9 isikwere igqibelele ye 8x8cm.
Sinqumle isikwere esimhlophe kwikhadistock emhlophe okanye iphepha elimhlophe. Kuya kufuneka ibe nomda ngaphantsi kwe-8 x 8 cm ukuyifaka ebhokisini. Isikwere esimhlophe siya kusebenza njenge template yokwenza enye yobukhulu obufanayo kwaye unqumle ifoto yemilinganiselo efanayo. kwizikwere ezimhlophe siza kuzoba iinkcukacha ezincinci njengemifanekiso emihle okanye imiyalezo.
Kufanele si yenza iibhokisi ezi-5. Ukwenza enye yazo sizoba isikwere se-16 x 16 cm. Kuya kufuneka sizobe imigca emininzi ngaphakathi: kuya kuba njalo i 8 x 8 cm isikwere embindini, ukujikeleza kuya kufuneka kubekho imida ye-4 cm. Xa sizoba imigca siqaphela ukuba ezinye izikwere zenziwe kwikona nganye. Sisika ngesikere icala elinye nje lwala mgca wenziwe ukusuka kwisikwere sekona. Xa usika, uya kusebenza njengeeflephu zokunamathisela imiphetho kwaye ngaloo ndlela wenze ibhokisi.
Ngaba ezinye iibhokisi ezi-4 ngaphandle kwalowo sisandul 'ukwenza, kodwa omnye wabo uya kufuneka abe malunga ne-3 okanye i-4 mm ngaphezulu kwicala ngalinye, kuba iya kuba yibhokisi encinane okanye isiciko seseti yokugqibela esiya kusebenza njengebhokisi eliphambili. Sigoba imida yeekona zeekona kunye sincamathelisa iiflaps ukwenza ibhokisi
Ukususela kwisakhiwo esenze ekuqaleni (24 x 24 cm) sinqumle izikwere ezisekoneni. Sithatha isakhiwo kunye sisonga yonke imigca ezazotywayo
Kwiiflaps ezimbini ezingekho kumqolo, sibeka i-silicone kunye nokunamathisela kwisikwere ngasinye ibhokisi. Kwisikwere esiphakathi sibeka ifoto kwaye kwezinye izikwere ezimbini eziseleyo sibeka i izikwere ezimhlophe esiwuzoba ngomyalezo. Siya kuyibamba ngentonga yeglue ukwenzela ukuba iphepha lingabhibhi.
Siphosa ifayile ye- iibhola porexpan kwibhokisi nganye kwaye siya kubeka iinkcukacha ukuba sifuna ukunika kude.
Ngeebhokisi ezimbini ezincinci esinazo, sivala iibhokisi ze-porexpan njengesiciko. Sivala yonke kwaye ngesona siciko sikhulu okanye ibhokisi siyavala okanye sigqume sonke isakhiwo. Ngoomatshini abaninzi bokubhoboza siya kwenza iimilo ezahlukeneyo kwaye siyihombise ibhokisi ngaphandle. Siza kuncamathelisa amanani kwaye siya kuba nebhokisi yethu ilungile!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » Imisebenzi yeekhadibhodi » Ibhokisi eyothusayo yoSuku lweValentine
Umnqwazi wepompom olula ukuhombisa